The Professor (2019) | MM Movie Store
” ရဈခကျြမငျးမှာ အဆငျ့(၄)ရှိတဲ့ ကငျဆာဖွဈနပွေီ….ရောဂါကအတျောလေးပြံနှံနပွေီ…မငျးရဲ့ကြောငျးကိုလညျးအသိပေးသငျ့သလိုမိနျးမနဲ့သမီးကိုလညျး အသိပေးသငျ့နပွေီ….အမွနျဆုံးလညျးကုသသငျ့နပွေီ”” ကြုပျမှာ အခြိနျဘယျလောကျကနျြသေးလဲ”“ကုသရငျ ၁နှဈပေါ့ ကံကောငျးလှနျးနရေငျ တဈနှဈခှဲ…မကုသရငျတော့ ၆လပေါ့…”
ရဈခဈြတဈယောကျဟာ ဆရာဝနျရဲ့ စိတျမကောငျးပါဘူးဆိုတဲ့နှဈသိမျ့စကားကိုလောလောလတျလတျကွားလိုကျရဲ့ သတငျးစကားကွားမှာပငျ အတတျနိုငျဆုံးပွနျပွုံးပွလိုကျတယျ….ဒီအပွုံးတှဟော ဘယျလောကျတောငျအသကျမဲ့နလေိုကျမလဲ…အနညျးငယျသာကနျြရှိတော့ သူ့ဘဝသကျတမျးကိုတှေးရငျးရဈခကျြတဈယောကျရဲ့ခွလှေမျးတှေ …
ကောငျးကငျကိုမော့ကွညျ့တဲ့သူ့မကျြလုံးတှေ…လူတဈခြို့ရဲ့ ရယျမောသံတှကေိုကွားရတဲ့သူ့နားတှေ…အားလုံးဟာ သူ့အတှကျအဓိပ်ပါယျမဲ့နသေလိုပငျ…ဒီကားမှာသရုပျဆောငျထားတဲ့မငျးသားကွီး Johnny Depp ကိုတော့အထှအေထူးမိတျဆကျပေးစရာလိုတော့မယျ မထငျပါဘူး…
သူဟာ ကောလိပျကပရျောဖကျဆာတဈယောကျဖွဈပါတယျ…တခွားဇာတျကားတှလေို ကနျြရှိတဲ့သကျတမျးမှာ ကောငျးမှုတှကေိုသူတျောစငျတဈပါးလိုလုပျ…ဘဝရဲ့တနျဘိုးဆိုတာဘာညာဆိုပွီးကောငျးပွီးရငျးကောငျးတဲ့ ဇာတျဟနျမဟုတျဘူး…
ပထမတဈခနျးမှာတငျသူ့ဘဝလကျကနျြခြိနျဟာ အနညျးငယျပဲသိပွီးတဲ့နောကျသူလုပျသှားတာတှကေ တကယျ့ကိုစိတျဝငျစားစရာကောငျးတယျ..သူ့ရဲ့သရုပျဆောငျဟနျကွောငျ့ပဲ ဒီဇာတျကားဟာ ပိုရုပျလုံးကွှလာတယျလို့တောငျပွောရမယျထငျတယျ…ကိုငျးခံစားကွညျ့လိုကျပါဦး….
ခငျဗြားတို့ရဲ့အကောငျးဆုံးသော ဇာတျကားစာရငျးထဲမှာ ဒီကားကိုကွညျ့ပွီးရငျဒီကားအပါအဝငျပဲဆိုပွီးထညျ့ဖွဈသှားလိမျ့မယျလို့ ကြှနျတျောထငျတယျ…
” ရစ်ချက်မင်းမှာ အဆင့်(၄)ရှိတဲ့ ကင်ဆာဖြစ်နေပြီ….ရောဂါကအတော်လေးပျံနှံနေပြီ…မင်းရဲ့ကျောင်းကိုလည်းအသိပေးသင့်သလိုမိန်းမနဲ့သမီးကိုလည်း အသိပေးသင့်နေပြီ….အမြန်ဆုံးလည်းကုသသင့်နေပြီ”” ကျုပ်မှာ အချိန်ဘယ်လောက်ကျန်သေးလဲ”“ကုသရင် ၁နှစ်ပေါ့ ကံကောင်းလွန်းနေရင် တစ်နှစ်ခွဲ…မကုသရင်တော့ ၆လပေါ့…”
ရစ်ချစ်တစ်ယောက်ဟာ ဆရာဝန်ရဲ့ စိတ်မကောင်းပါဘူးဆိုတဲ့နှစ်သိမ့်စကားကိုလောလောလတ်လတ်ကြားလိုက်ရဲ့ သတင်းစကားကြားမှာပင် အတတ်နိုင်ဆုံးပြန်ပြုံးပြလိုက်တယ်….ဒီအပြုံးတွေဟာ ဘယ်လောက်တောင်အသက်မဲ့နေလိုက်မလဲ…အနည်းငယ်သာကျန်ရှိတော့ သူ့ဘဝသက်တမ်းကိုတွေးရင်းရစ်ချက်တစ်ယောက်ရဲ့ခြေလှမ်းတွေ …
ကောင်းကင်ကိုမော့ကြည့်တဲ့သူ့မျက်လုံးတွေ…လူတစ်ချို့ရဲ့ ရယ်မောသံတွေကိုကြားရတဲ့သူ့နားတွေ…အားလုံးဟာ သူ့အတွက်အဓိပ္ပါယ်မဲ့နေသလိုပင်…ဒီကားမှာသရုပ်ဆောင်ထားတဲ့မင်းသားကြီး Johnny Depp ကိုတော့အထွေအထူးမိတ်ဆက်ပေးစရာလိုတော့မယ် မထင်ပါဘူး…
သူဟာ ကောလိပ်ကပရော်ဖက်ဆာတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်…တခြားဇာတ်ကားတွေလို ကျန်ရှိတဲ့သက်တမ်းမှာ ကောင်းမှုတွေကိုသူတော်စင်တစ်ပါးလိုလုပ်…ဘဝရဲ့တန်ဘိုးဆိုတာဘာညာဆိုပြီးကောင်းပြီးရင်းကောင်းတဲ့ ဇာတ်ဟန်မဟုတ်ဘူး…
ပထမတစ်ခန်းမှာတင်သူ့ဘဝလက်ကျန်ချိန်ဟာ အနည်းငယ်ပဲသိပြီးတဲ့နောက်သူလုပ်သွားတာတွေက တကယ့်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်..သူ့ရဲ့သရုပ်ဆောင်ဟန်ကြောင့်ပဲ ဒီဇာတ်ကားဟာ ပိုရုပ်လုံးကြွလာတယ်လို့တောင်ပြောရမယ်ထင်တယ်…ကိုင်းခံစားကြည့်လိုက်ပါဦး….
ခင်ဗျားတို့ရဲ့အကောင်းဆုံးသော ဇာတ်ကားစာရင်းထဲမှာ ဒီကားကိုကြည့်ပြီးရင်ဒီကားအပါအဝင်ပဲဆိုပြီးထည့်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်တယ်…
Mr. Robot (Season 1) အပိုငျး (၁)
See (Season 1) အပိုငျး (၆)